Qindaa'inoota maxxansa durtii
Impressi (officename) tiif dirfaloota durtii maxxansuu qindeessuuf, Meeshaalee – dirqaloota – impressi PRODUCTNAME – Maxxansa fili.
Pirezanteshiini ammaantiif dirqaloota maxxansaa qindeessuu.
maayilii – maxxansa fili.
Dalagaa maxxansa amaa qofaaf, qindaa'innootni kunneen, Meeshaalee – Dirqaloota – impressi % PRODUCTNAME Impress
Maxxansa keessatti, dirqaloota maxxnsa durtii faccisu.
Faayilii – maxxansa fili.
Lakkoofsa islaayidootaa fuula fulaan maxxansu barbaadduu fili
Dirqaloota maxxansaa, hirtaaleef qindeessuu
Cancala hirtaa cuqaasi
Sanduuqa qaaqaa Irraantoo fi Jalaantoo banuuf, Saagi – Lakkoofsa Fuulaa fili.
Barruu irraantoo fi jalaantoo hirtaaleedhaaf galchuf Yaadannoo fi Hirtaalee cuqaasi.
Irraantoo, jalaantoo fi guyyaaf barruu galchi. Fuulota hirtaaf lakkoofsa kennuu yoo feete, saandua Lakkoofsa fuulaa mirkanneessi. Barruun Irraantoo keeti akka maxxanfamu yoo barbaaddee sanduuqni filannoo akka dandeessifame mirkanneeffadhu.
Hundaaf fayyadami cuqaasi.
Hirtaalee ykn yaadannoo maxxansuu
Sanduuqa tarree qabeentootaa enqaasitii akaakuulee qabeentoota maxxanfamu qaban fili
Hirtaalee yookin yaadannoo fili, ykn islaayidootaa tokkon tokkon fuula waraqaa kanarratti maxxanfaman fili.
Fii;ppta waraqaa ,axxamfam orratto upp teessi,a os;aauodo lam borpp barbaadde, islaayidoota gara naannoo mul'annoo hirtaatti siqsuuf, hantuuttee fayyadmi.
Hangii islaayidootaa maxxansuu
Mul'annoo – fooyyaa islaayidii fili.
Jijjiiraa gadi qabitii hangii islaayidoota maxxansuu barbaaddu fili
Lakkoofsoota islaayidii maxxansuu barbaaddu. galchi, kana boodaTole cuqaasi.
Title is: Pirezenteshiinoota maxxansu.